Olee otú Iji Zụlite Travel Dị A Nomad Site Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Zụlite Travel Dị A Nomad Site Europe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/07/2020)
Ihe bụ ihe ọzọ, ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè dị ka a nomad nwere a ọtụtụ ndị ọzọ uru. Ị na-na-enweta ihe niile dị gị oge, na ụgbọ oloko na-enye gị ohere ime ya were were na enweghị ihe ọ bụla hassles. Ọ pụrụ ịbụ onye na-adịghị mgbe ụfọdụ, ma e nweghị nchegbu na a mode nke njem, ebe ụgbọ elu bụ ihe kpamkpam dị iche iche ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme njem na ụgbọ elu, n'ebe ahụ bụ mgbe niile nchegbu nke mmadụ karịrị akarị ọdụ ụgbọelu na overzealous nchebe. Ihe bụ ihe ọzọ, n'ebe ụfọdụ dị, ị ga-esi gị ebe ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-a ụgbọ okporo ígwè!
Olee otú Zọpụta ego mgbe ị Train Travel ka a Nomad
Kasị ego nọrọ mgbe Train Travel ka a Nomad-aga ụlọ ntinye akwụkwọ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị akwụkwọ gọọmenti rụrụ, ị nwere ike ịzọpụta a otutu ego dị ka ha na-na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọnụ karịa hotels ma na-enye a mma ma ndị ọzọ ahụmahụ kwesịrị ncheta. Ihe bụ ihe ọzọ, mgbe ị na-eme njem naanị, ị nwere ike n'akwụkwọ bụla n'ime ụlọ na-dị ka ọtụtụ ndị na-na na ọ, nke bụ ọnụ ala nhọrọ. Na-atụkwasị anyị obi, ị ga-chọrọ nke a n'ihi na a ga-enye gị ohere dap na ndị ọzọ dị ka kpọrọ njem.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ izute obodo, i kwesịrị iji Couchsurfing, n'ihi na otú a ị ga-esi na-anọ na obodo. Plus, ha nwere ike ịgwa gị ihe banyere obodo ha ma na-egosi na ị na niile fun ebe uru ịga.
The ọzọ ihe na-eri efep ke gị ego bụ, ọma, eri. Ị nwere ike ịzọpụta ego na nri site na-akwadebe gị nri na mbikọ ma ọ bụ ụlọ. Kasị gọọmenti rụrụ na ụlọ na-enye esi nke i nwere ike iji maka free. Ihe bụ ihe ọzọ, mbikọ ọzọ ohere bụ fechapụta na ndị mmadụ na-akwadebe ụfọdụ nri ịkọrọ.
Train Travel ka a Nomad Atụmatụ
Cheta njem ìhè. Ọ bụrụ na ị na-aga na-a ụgbọ okporo ígwè eme njem nomad, ị ga-enwe ihe mfe oge naanị ebu ihe dị mkpa. Gọọmenti rụrụ na-enye ọtụtụ nke dị oké mkpa eji enyere ndụ aka dị ka akwa nhicha, hairdryers na ka, ya mere na ị na-adịghị na-eme ka gị. Plus, ha na-emekarị nwere saa igwe na dryers na i nwere ike iji maka a euro ma ọ bụ abụọ, otú ị na-adịghị na-ọtụtụ uwe na ị ma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na a otutu stof, backpacking pụrụ ịbụ a mma.
Na mkpokọta, ụgbọ okporo ígwè eme njem dị ka a nomad bụ a mara mma ma na hassle-free ahụmahụ. Ị nwere ike ịga ọtụtụ ebe mfe niile gafee mara mma mba ndị dị ka France, Germany, Italy, na ndị ọzọ. Plus, ị ga-esi na-ahụ mara mma obodo na pụtara Okirikiri uwa nwere na-enye. Ọ dịghị ndị ọzọ njem nhọrọ ga-enye gị ihe dị otú ahụ agaghị echefu echefu na fun ahụmahụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#traveleurope europeantravel europetravel Atụmatụ trainjourney Tranride ụgbọ oloko traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem Travel traveltips